Otu esi edozi nsogbu ọkọ nke PVC plastic floor-News-Topflor China limited
Plasticlọ plastik PVC bụ ụdị ọhụrụ nke ihe ịchọ mma ụlọ dị mfe nke na-ewu ewu nke ukwuu n'ụwa taa, nke a makwaara dị ka "ihe eji eme ala dị larịị". A nabatara ya na obodo ukwu na obodo ukwu na China ma jiri ya mee ihe.
Ejirila plastik plastik mee ogologo oge, ihe nkedo dị iche iche na akara akpụkpọ ụkwụ ojii ga-apụta n'ala, nke ga-emetụta ọdịdị ahụ nke ọma. Ọnọdụ ndị a enweghị ike idozi ya site na nhicha kwa ụbọchị. Mmeghari ohuru? Ọ fọrọ nke nta ka ọ na-abawanye ụgwọ. Mụta ụfọdụ usoro ịkpụzi plastic ala nwere ike idozi isi ọwụwa a.
1. homogeneous na transperent ịkwanyere plastic n'ala nwere ọkọ, nke nwere ike smoothed na a grinder, na mgbe ahụ na waxs na-eme ka ọ na-enwu dị ka ọhụrụ!
2. Ejila mmiri plastik tinye ya na mmiri. Onye na-ehicha ihe nhicha, mmiri na chịngọm dị mfe ịmeghachi na kemịkal, na-eme ka elu ala ahụ mebie ma ọ bụ bulie ya elu. Ya mere, adighi nma inwe otutu mmiri, karie nke oku oku mopping. Mgbe ntụpọ dị ka ink, ofe, mmanụ, wdg pụta, hichaa ya na mmiri ncha. Ọ bụrụ na ọ dịghị ọcha, hichaa ya na obere mmanụ ụgbọala ruo mgbe ewepụrụ unyi ahụ.
3. Multi-oyi akwa ọtụtụ ihe mejupụtara plastic n'ala nwere arọ scratches. Ọ bụrụ na ọ na-agbaso iwu ederede nke ala ahụ mejupụtara, ịnwere ike ịgbalị iji otu eriri ịgbado ọkụ na-edozi ya, ma ọ bụ jiri otu iko iko agba ma ọ bụ akara iji rụzie ya. Ọ bụrụhaala na agba ndị ahụ yiri. Ọ bụrụ na ọkọ ahụ dị omimi ma ọ bụ ọdịdị ahụ pụrụ iche, a na-atụ aro iji dochie ebe mebiri emebi na ala nke otu nkọwapụta, ihe nlereanya, ọkpụrụkpụ, na ihe.
4. Ọ bụrụ na etinyere aja PVC, ofe, mmanụ, wdg, ọ ga-ebu ụzọ jiri mmiri dị ọcha kpochapụ ma ọ ga-ehichapụ ya. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, ị nwere ike iji ncha ncha, mmiri ncha na ncha akwa mee ihe ozugbo. Chere maka mmiri agwakọtara ihicha ruo mgbe ewepụrụ unyi.
N’ikpeazụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka edochi ụlọ PVC plastik n’ozuzu ya, ọ bụrụhaala na ala plastik mbụ adịghị emerụ ahụ nke ukwuu, enwere ike ịtọgbọ ya n’ala nke mbụ, nke nwere ike belata oge na ego.
Kachasị ejiji kpara ụkpụrụ ịkwanyere n'ala